Kulan deg deg ah oo madaxda dalka ay ka yeesheen Qaraxii lagu weeraray Central Hotel – STAR FM SOMALIA
Kulankaan Deg Deg ahaa oo uu shir gudoominayay Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah Ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xalay lagu qabtay Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa looga Hadlay Qaraxii Kooxda Al shabaab ay shalay ka geysatay Hotelka Central Ee Magaalada Muqdisho Halkaa oo ay ku geeriyoodeen Dad ka badan 25 oo shacab iyo Mas’uuliyiin.
Kulnka oo ahaa mid al baabadu u xiranyihiin oo ay Saxafadu banaanka ka joogtay ayaa waxaa uu qaatay Dhowr Saacadood ayaa waxaa ugu horeyn loo istaagay daqiiqado loona duceeyay Dadkii Muslimiinta ahaa ee Qaraxyadaasi ku dhintay iyadoo kuwa dhaawac ahna alaah looga baryay in uu Caafimaad Deg deg ah siiyo waxaana shirkaas diirada lagu saaray xoojinta amaanka Caasimada iyo sidoo kale sidii Cadaalada loo horkeeni lahaa Dadkii Falkaas ka mas,uulka ahaa.
Gabagabadii kulankaasi ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya Cabdi Risaaq Cumar Maxamed oo Faah Faahiyay go’aannada ka soo baxay kulankaas isagoo sheegay in Guddi ka kooban Wasiirka Wasiirka Amniga Gudaha, Wasiirka Gaashaandhigga, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Wasiirka Caafimaadka iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa waxay ka howl geli doonaan taakuleynta dadka ay waxyeeladu soo gaartay.
Sidoo kale waxaa la dhisay Guddi Amni oo hormuud ay ka yihiin Wasiirka Amniga Gudaha iyo Wasiirka Gaashaandhigga, kuwaas oo baaritaan ku sameyn doona weerarkii shalay lagu qaaday Central Hotel.